2.000 billion abantu bazoba ababaleki besimo sezulu ngo-2100 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kubangela ukuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni eziphakeme futhi Lokhu kubangela ukwanda kolwandle. Maningi amadolobha angasogwini okuthi uma izinga lolwandle liqhubeka nokukhuphuka, basale bengenalo ugu. Abantu okufanele bathuthe noma bafudukele kwezinye izindawo ngenxa yalokhu kukhuphuka kolwandle noma ngenxa yezinye izimbangela ezihlobene nokwanda kokuvama nokuqina kwezimo zezulu ezimbi kakhulu (njengeziphepho, izikhukhula, isomiso ...) babizwa ngokuthi ababaleki besimo sezulu.
Kulinganiselwa ukuthi ngonyaka ka-2100, abantu abangaba yizigidi eziyizinkulungwane ezimbili (lokhu kuzoba yingxenye yesihlanu yabantu emhlabeni ngaleso sikhathi) bangaba ababaleki besimo sezulu, ikakhulu ngenxa yokwenyuka kwezinga lolwandle.
1 Ukuguquka kwesimo sezulu nababaleki
2 Izibikezelo zesikhathi esizayo
Ukuguquka kwesimo sezulu nababaleki
Izigidi nezigidi zabantu zihlala emadolobheni asogwini asongelwa ngokwengeziwe yizimo zezulu ezimbi kakhulu njengeziphepho, izikhukhula, nokukhuphuka kwamazinga olwandle abangelwa ukuguquka kwesimo sezulu. Laba bantu abanempilo yabo, imindeni yabo, abangani, abasebenza nokunye, baphoqeleka ukuthi bathuthele kwezinye izindawo eziphephile nezingahlala abantu isikhathi eside.
Kwenziwe ucwaningo eCornell University oluthi sizoba nabantu abaningi ngokwengeziwe emhlabeni onomhlaba omncane nokuthi lokhu kuzokwenzeka ngokushesha okukhulu kunalokho esicabanga.
Ngokwanda kolwandle, bonke abantu abahlala ezindaweni ezisogwini kuzodingeka bathuthele ezindaweni eziphephile maphakathi nezwe. Ngakolunye uhlangothi, inani lomhlaba liyanda minyaka yonke. Ngakho-ke konke lokhu kuholela ekubeni kuhlaliswe abantu abaningi ngokwengeziwe ezindaweni ezingahlaleki. UCharles Geisler U-Emeritus Professor of Developmental Sociology eCornell University, uchaza ukuthi ukukhuphuka kwezinga lolwandle esikhathini esizayo ngeke kuthuthuke kancane kancane, kepha kungaqala ukukhuphuka ngokushesha okukhulu. Ngaphandle kwalezi zibikezelo ezinembe ngokwengeziwe ezivela emphakathini wesayensi, osopolitiki ababheki izithiyo ezibalulekile zokungena kwababaleki besimo sezulu basogwini, Njengabanye ababaleki, bazobathola lapho bethuthela endaweni ephakeme.
Izibikezelo zesikhathi esizayo
Ngokwemibiko yeZizwe Ezihlangene, inani labantu emhlabeni kulindeleke ukuthi ukwanda kubantu abayizigidigidi eziyi-9.000 ngo-2050 no-11.000 billion ngo-2100. Kodwa-ke, sizoba nomhlaba omncane olimekayo, sibe nendawo encane yokuthuthukisa abantu, futhi ukukhuphuka kwamazinga olwandle kuzokonakalisa izindawo eziningi ezilimekayo, ezinjengemifula i-deltas, izindawo ezivundile, njll. Futhi konke lokhu kuzoholela ekutheni abantu bafune izindawo ezintsha zokuhlala.
Cishe, Abantu abayizigidigidi ezi-2.000 bangaba ababaleki besimo sezulu ngonyaka ka-2100. Amandla okushayisana okuzala kwabantu, ukucwilisa izindawo ezingasogwini, ukuhlehla kwezindawo zokuhlala kanye nezithiyo zokuhlala kabusha ezweni kuyinkinga enkulu. Ngaleso sikhathi kuzoba nezinkinga eziningi ezinkulu ezinjengababaleki besimo sezulu, izimpi zemithombo yemvelo, ukwehla kokukhiqizwa kweplanethi, izindawo zizodingeka ukugcina amagesi abamba ukushisa akhokhela ukuncibilika kwe-permafrost nokugawulwa kwamahlathi, njll. Izibikezelo zimbi ngandlela thile ngekusasa elilindele izizukulwane zamanje.
Lo mbhalo uchaza izixazululo ezibambekayo nokulungiswa okusebenzayo ezindaweni ezinjengeFlorida neChina, ezihlanganisa izinqubomgomo zokusetshenziswa komhlaba ezisogwini nezingaphakathi ezweni ngokulindela izinguquko ezenziwa yisimo sezulu sabantu. IFlorida inogu lwesibili olude kunawo wonke e-United States futhi kube nokufuduka kwasogwini okuboniswa eMthethweni KaHulumeni Wokuhlela Okuphelele.
Akukona ukuphakama kolwandle kuphela okukhathazayo, kepha futhi nezinye izinto ezimbi kakhulu njengeziphepho noma iziphepho ezishisayo ingadudula amanzi olwandle maphakathi nezwe. Ngokomlando, abantu benze umzamo omkhulu wokubuyisa umhlaba olwandle, kepha manje baphila ngokuhlukile: izilwandle zibuyisa izikhala zomhlaba zeplanethi
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Abantu abayizigidigidi ezi-2.000 bazoba ngababaleki besimo sezulu ngonyaka ka-2100